Iko kusagadzikana kwaunosiya naCarlos Montero, iyo nhoroondo yekuparwa kwemhosva iyo inokukwezva | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Mabhuku, Nhema nhema, dzakawanda
Iyo nyonganiso yaunosiya.
El kukanganisa kwaunosiya ibhuku rematsotsi rakagadzirwa nemunyori wechiSpanish Carlos Montero. Rakaburitswa neMupepeti Espasa Libros munaKurume 22, 2016, inonakidza kwepfungwa izere nekufungidzira uye rangano kubva pamutsara wekutanga kusvika kumagumo asingatarisirwe. Yakagamuchirwa neongororo dzakanaka pazvivakwa zvakapihwa kuongororwa kwemabhuku, kunyangwe vamwe nyanzvi dzezvinyorwa vachinongedzera kuvapo kwemakakatanwa mumutsara wenyaya.
Ruzhinji rwe Vaverengi vanoshamiswa nekubata muropa kunoitwa nebhuku pamwe chete nekuverenga kwaro kuchikurumidza uye kwakanaka (Iyo inoumbwa nemapeji 408). Kune rimwe divi, iwo mafungiro akashata anoratidza kuora kwavo nekuvharwa, pamwe nekushaikwa kwechinangwa chinogoneka mukati mekuvakwa kwevamwe vatambi. Zvisinei, Iyo nyonganiso yaunosiya Iine mhando isingarambike: haisiye munhu asina hanya.
1 Context uye nharo
2 Kugadziriswa kweTV
3 Synthesis ye Dambudziko raunosiya
3.1 Raquel nekusvika kwake muNovariz
3.2 Zvinotyisidzira uye zvakasununguka magumo
4 Kuongorora kwaMambo Waunosiya
Context uye nharo
Iyo neuralgic theme ye Iyo nyonganiso yaunosiya kushungurudza nenzira dzakasiyana siyana, kusanganisira iyo inonzi yekudheerera kwepamhepo. Ehe, iyo "yakajairika" kudheerera pamasocial network nhasi. Pfungwa yekuvengana nekusingaperi yakavakirwa padhuze naRaquel, protagonist, mukudyidzana kwake nerima rakashata uye vatambi vane chinangwa chakaipa, hapana mumwe wavo akavimbika, haatarisirwe.
Zviitiko zvinotsanangurwa zvinoitika muNovariz, guta rekunyepedzera riri kuGalicia. Nekudaro, kune vaverengi vazhinji vanoziva nharaunda ino yekuchamhembe kweSpain, iyi enclave inoratidza chaiyo chaiyo hunhu, yakatorwa kubva nyore kuzivikanwa enzvimbo, ekuvaka, anthropological uye tsika zvakasarudzika munzvimbo ipi neipi yeGalician.
Kunyangwe iri iro rekutanga kuburitswa bhuku raMontero, bhuku iri rakapihwa Primavera de Novela Prize yegore ra2016 (yakanakisa nhoroondo yematsotsi). Uyezve, Iyo nyonganiso yaunosiya ichaunzwa kuterevhizheni neNetflix. Ichi chigadzirwa chinoratidza kufarirwa kwebasa kunyangwe kana pasina kubvumirana pamusoro pekugamuchirwa kwaro pakati peveruzhinji.
Bhuku rino rinogadziriswa pasi peiyo serial fomati, ine zvitsauko zvisere, chimwe nechimwe chine chinguva chemaminitsi makumi mana. Zviitiko zvekunze zvichanyorwa muGalicia. Vatambi vechirongwa ichi vanosanganisira vanozivikanwa uye vachiri kubuda maartist, anosanganisira Inma Cuesta, Tamar Novás, Arón Piper, Bárbara Lennie naRoberto Enríquez.
Munyori Carlos Montero.
Synthesis ye Dambudziko raunosiya
Raquel nekusvika kwake muNovariz
Carlos Montero akanyora nhoroondo yakanyanyisa kukomberedza Rachel, mutambi mukuru. Iye ndiye anorondedzera zviitiko mumunhu wekutanga uye anoita kunge ari munjodzi inogara ichifa. Asi, pakutanga kwebhuku mamiriro ezvinhu enjodzi haasi kuoneka. Asi, munyori anokwanisa kuishandura kuita rudzi rwekunzwa kwekuvanda kana kutyisidzira kwakavanzika.
Pakutanga kweruzivo, Raquel anosvika muNovariz (chinyorwa chekunyepedzera chaOurense), iro chairo guta riri kuGalicia kunogara mhuri yemurume wake. Ikoko anotanga kushanda semudzidzisi mudzidzisi pane yemunharaunda chikoro. Mamiriro ezvinhu akasviba haatore nguva kuti aoneke, nekuti nguva pfupi mushure mekuziva nezverufu rweakamutangira, Elvira, mune zvinoita sekuzviuraya.
Zvinotyisidzira uye zvakasununguka magumo
Mumazuva anotevera maonero anoenderera mberi achiwedzera, kunyanya kana mumwe munhu anosiya chinyorwa chinovhiringidza muhombodo yaRaquel mushure mekupa kirasiuye "Uye zvinotora nguva yakareba sei kuti uzviuraye?" Uye zvakare, iye haagutsikane neshanduro dzaanonzwa nezverufu, pane kudaro, dzinoratidza kusavimba kwakanyanya.
Kune akawanda akasununguka magumo. Chekutanga pane zvese: kana Elvira aifungidzirwa kuti mudzidzisi anodikanwa nevadzidzi vake, akanyura sei mukushushikana kwakakura zvekutora hupenyu hwake? Chii chaizvo chakaitika? Asi handicho chinhu chinonyanya kunetsa, zvakanaka Raquel anogara achishamisika kana paine macabre pateni iri kuzvidzokorora pachayo naye.
Saka, Raquel anongofanirwa kuita imwe sarudzo yekujekesa zvese: kuongorora kufa kwaElvira iye oga. Mhedzisiro yacho ndeyekufungidzira kwevagari veNovariz, kunyange, ndicho chinhu chekuzvidzwa kunowedzera. Chinangwa chemhedzisiro yezvinhu chinova chinhu chisinganetsi, chinoshanduka.
Hapana anopunyuka fungidziro. Raquel anotadza kuvimba chero mugari weguta diki reGalician. Haakwanise kana kuvimba nemurume wake wega ... zvimwe zvinongedzo zvinonongedzera kwaari semuiti wekufa kwaElvira. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, iyo novel inowana yakatowanda frenetic kumhanya nekuda kwezvakateedzana zvakavanzika zvinoratidzwa.
Chikamu chekusava nechokwadi chinosvika pakakwirira kwazvo, kusvika padanho rekuti pakati pebhuku kusahadzika kwakawanda kunowanzomuka nezve hutano hwevose vanobatanidzwa. Izvo zvisingazivikanwe zvakaunganidzwa mu psyche yaRaquel zvinoshandurwa kuita zvinotambudza, ndezvipi zvinangwa zvechokwadi zvevamwe? Ungazviwana sei kana vanhu vakatenderedza vasingakurudzire kuvimba kudiki?
Kuongorora kwaMambo Waunosiya
Kunyangwe vamwe vatsoropodzi vezvinyorwa vachinongedzera kukudziridzwa kwemavara akaomarara zvakakosha kuti utore pfungwa yehunhu hwenyaya. Mushure mezvose, mazwi acho anobva mukati mepfungwa dze protagonist. Nechikonzero ichi, imwe nzira isina kujeka yekuita kwevechidiki inotsanangurwa mubasa iri inogona kunge ichipembedzwa.
Mhedzisiro yekutamba iyi inoshamisa. Mamwe mazwi evaverengi painternet anoratidza kupera kwe Iyo nyonganiso yaunosiya seinopokana kana "ine mvere kwazvo". Mukupesana, wongororo dzakanaka dzakawanda kurumbidza maitiro emunyori ekutaura nyaya uye kushuvira kuburitswa kweimwe sequel.
Quote nemunyori Carlos Montero.
Ukuwo, mutauro wakawandisa unoshandiswa naMontero unowedzera kubata kwechokwadi kubasa rake. Munyori zvakare anotamba achitya nekutya kwevanopokana, achikurudzira vaverengi kuti vafungisise pamusoro penyaya dzakaita semishonga, dzidzo, bonde uye kudzora kweruzivo rwunotenderera pakati pemidziyo yenhare.
Ndinoreva Iyo nyonganiso yaunosiya inosangana nechimwe nechimwe chezvinhu zvakakosha mune yakanaka yekunakidzwa kwepfungwa. Nechikonzero ichi, zvinogona kuvimbiswa kuti Carlos Montero awana ngano iyo yaanoshandisa zvakanakisa zviwanikwa zvekare zvechigarire uye zvisingaenderane nekufungidzira, pamwe chete nemisoro yakajairika munharaunda dzazvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Iyo nyonganiso yaunosiya naCarlos Montero